Palestina: “Zava-poana ny rehetra eto Gaza – ny fifohana rivotra, ny fihazakazahana, ny fanantenana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2009 19:03 GMT
Ato anatin'ity topimason'ny blaogy avy any Gaza ity no andrenesantsika ny antsipirihan'ny fanafihana ny toeram-pitsaboana Al Quds ao amin'ny faritry Tel al-Hawa any amin'ny tananan'i Gaza , avy amina Aostalianina mafana fo izay teny an-toerana tamin'iny fotoana iny, ary Italianina iray manoritsoritra lehilahy maratra tsaboina ao amin'io toeram-pitsaboana io, izay tsy mahalala akory fa ao amin'io toeram-pitsaboana io koa ny zanany vavy, saingy efa rotika.
Manao ahoana, 14 minitra sisa no faharetan'ny vatoaratry ny solosaina fitondrako mandehandeha, satria tafasaraka amin'ny famahanana azy aho…
Misaotra ny mpiara-miasa amiko any Manchester aho tamin'ny namadihany ny antso an-tariby mivaralila ho soratra ho an'ny blaogy – somary mikorontana kely ilay vaovao ary manantena aho fa ho afaka mandamina azy ho anareo tsy ho ela (rahoviana anefa?!)
Farany, raha afohezina:
Alarobia alina: mihamafy hatrany ny fanafihana any amin'ny faritry Tel al-Hawa izay misy ilay toeram-pitsaboana [Al Quds]. Fantatro fa anjaranay izao no hitrangan-javatra. Ny antsasaky ny fiara mpamonjy voina sy ny mpitsabo no nalefa tany Al Shifa [toeram-pitsaboana], nanjary sarotra ny hivoaka ny building ary toa lasa nanao zavatra tsy noeritreretina akory- nandeha natory.
Alakamisy maraina: nifoha ary nahazo fanamafisana fa hoe maromaro ny fanafihana nianjady tamin'ny trano nandritry ny alina nefa tsy dia nisy fahasimbana goavana. (Ho fanazavana: Al Quds dia toeram-pitsaboana goavana tokoa: ny toeram-pandraharahana/fitsaboana , mifampiankina amin'ny foibe ara-tsosialy dia manana toerana fanaraha-maso ny bevohoka sy trano fampiterahana ihany koa sy fandraisana vonjy taitra ao amba,y lakaliny ao, mifampitohy amin'ny tranoben'ny Croissant Rouge. Nikorontana ny fiasan'ny toeram-pitsaboana manontolo sy ny tany ambany lakaly nanomboka hatrany amin'ny 27 Desambra niandohan'ny fanafihana.) Fotoana fohy monja taorian'ny nifohazako, teo am-pitazanana teo am-baravakely aho no nisy baomba nilatsaka tany ivelany izay nitarika haitrano. Nanomboka namono ny afo izahay, no nisy fanafihana hafa indray teo amin'iny toerana iny ihany. Ny fanafihana fanintelony dia nahatonga haitrano teo akaikin'ny “service de pédiatrie”, teo ivelan'ny varavaran-kely iray hafa. Novonoina tamin'ny rano nalaona tamin'ny tavy sy vilany nofenoina rano avy amin'ny “robinet”.
Alakamisy, tapak'andro maraina: fanafihana goavana roa – rokety maro – nidofotra namaky ny rindrin'ny toeram-pitsaboana tao amin'ny tobom-pamatsiana fanafody. Iray hafa koa nilatsaka tao amin'ny tafon'ny foibe sosialy ka nahatonga fahasimbana goavana sy fahamaizana. Voafehin'ny mpamonjy voina izany afo izany. Tamin'ny fotoana nahatongavako teny an-toerana anefa (nameno seau tamin'ny rano aho ) dia efa nanadio ny poti-javatra ry zareo, ary nisy mpamonjy voina iray nipetraka tamin'ny tany sady nitomany.
Tamin'izaho teny, naheno kiakiaka, niakatra tany ambony rihana ary nahita an'i dokotera S., feno rà, nitondra zazavavy kely avy tany amin'ny arabe izay notifirin'ny “snipers” teo amin'ny tarehiny sy ny kibony. Hitanay ny rainy nianjera tao amin'ny tohatry ny hôpitaly, voatifitra ny tongony. Nisavoritaka ny reniny, nikiakiaka hoe mbola misy zanany vavy iray tavela any aoriana. i S, izaho sy mpamonjy voina hafa no nivoaka mba haka azy, nahita azy tsy lavitra teo, notrotroin'i S izy ary nentiny tao amin'ny toeram-pitsaboana. Izaho sy ireo mpamonjy voina sasany dia samy nahatsapa fa ry zareo ireto dia mpialoha lalàna ihany amin'ireo olona maro nitsoaka ny fonenany, izay maro no lasibatry ny afo. Fotoana fohy taorian'izay dia nahazo vaovao ihany koa aho fa maro ireo trano nitsofohan'ny tafika ka nakan'izy ireo ny vatan-dehilahy rehetra, tsy mbola fantatro kosa izay nanjo azy ireo. Tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana ny olona satria mihevitra izy ireo fa hieren-doza rehefa any, ary noho ny tahotra ny tifitry ny “sniper” dia nivoaka izahay mba hiahy azy ireo miaraka amin'ny akanjo maha-Coissant Rouge […] Teo amin'ny olona 600 no tao amin'ny toeram-pitsaboana, tàzana ny fiara mifono vy nandritra ny fivoahana an-kamehana nataonay, ora vitsy taty aoriana dia nanao “fanavotana aina an-tongotra” ivelan'ny toeram-pitsaboana noho ny tsy fahampian'ny hoenti-manana izahay sy ny mpamonjy voina hafa dia niverina tany amin'ny toeram-pitsaboana satria mbola nisy marary eny ary fianakaviana maro hafa no efa tonga mba hitady fiarovana, nefa nisy “missile” hafa nilatsaka teo amin'ny trano be teo afovoan'ny faritra izay nahatonga haitrano, niparitaka haingana dia haingana, nanohitra ny afo ireo mpitsabo mandra-pahatongan'ny fiara mpamonjy voina, namoaka ny olona, na dia miaraka amin'ny fandriana aza, teny amin'ny arabe, tao anaty haizina miaraka amin'ny tifitra sy fipoahana mbola mitohy…
Kanadianina mafana fo, Eva Bartlett, ao amin'ny blaogy In Gaza:
Nandatsaka baomba tamina fotoam-pandevenana iray tao amina sekoly iray any Shuja'iyya, any atsinanan'i Gaza ny fiaramanidina mpiady Israeliana. Minitra vitsivitsy talohan'izay, raha mbola teo ampanaovana veloma farany ny havany maty novonoin'i Israely ireo fianakaviana. Dia folo koa izao farafahakeliny no maty. Zava-poana ny rehetra aty: ny fifohana rivotra (mifoaka setroka simika), ny fihazakazahana sy ny fitadiavana toerana hieren-doza (tsy misy toerana hieren-doza), ny fanamelohana ny helok'i Israely mandritry ny ady (izay toy ny nataon'i John Ging [Tale mpandrindran'ny UNRWA ao Gaza] , izay raha tsorina, fanamelohana ny fandarohana baomba voalohany ny toeram-pianarana iandraiketan'ny Firenena Mikambana sy ny fampiasana daroka baomba misy akora simika – fosfaoro fotsy, hoy i Ging – tao amin'ny foiben-toeran'ny the UN , miaraka amin'ny tahirin-tsakafo natao ho an'ireo tra-pahavoazana ao Gaza tao aminy. Zava-poana ny rehetra, ny manantena, ny misaona, ny hahatafiditra any amin'ny toeram-pitsaboana (voatafika ny toeram-pitsaboan'i Wafa, novonjena dia mbola voatafika indray; ny toeram-pitsaboana ao al Quds dia voazera baomba nisesisesy omaly, nirongatra ny afo nandritry ny alina, ka tsy maintsy nilàna famindrana toerana – eo ambanin'ny loza mitatao noho ny fivezivezen'ny fiara mifono vy israeliana sy ny tifitry ny “snipers” etsy an-daniny), ary – mazava ho azy – ny fijanonana any an-trano syny fanantenana ny tsy hilatsahan'ny “missiles”.
Vittorio Arrigoni dia Italianina mafana fo sy mpitoraka blaogy ao amin'ny Guerrilla Radio, ary manoritsoritra ny fifanenany tamina lehilahy maratra tany amin'ny toeram-pitsaboana:
Ny baomba roa nilatsaka teo amin'ny tranon'i Ahmed Jaber dia nanery ny fianakaviany hitsoaka, nefa tara loatra. Ny fipoahana fahatelo dia nanototra olona fito tao amin'ny fianakaviany tany ambanin'ny fihotsahana, ary zaza roa, valo sy sivy taona, mpiray vodirindrina aminy. Miteny izy hoe: “Niverina any amin'ny taona 1948 isika. Io no sazy amin'ny fitiavantsika ny tanindrazantsika. Azo endahin-dry zareo amin'ny vatako ny tanako sy ny tongotro, fa tsy afaka hampanary ahy ny tanindrazako mandrakizay ry zareo.” Nalaina mpitsabo iray aho, ary nilazàny fa tonga ny zanaka vavin'i Ahmed ,fito taona , potipotika, ary ao anatina baoritra kely. Tsy nanana herim-po ilazana izany aminy ry zareo, sao dia hanaratsy ny toe-pahasalamany izay efa mampatahotra ihany.
Ny 15 Janoary dia dia henonay tamin'i Nader Houella, izay mandamina ny vondrona blaogy Moments of Gaza, fa nisy fahatapahana vetivety ny fifandraisany tamin'ilay Libaney mafana fo Natalie Abou Shakra monina any Gaza. Nanomboka tamin'izay dia afaka nanoratra lahatsoratra maromaro izy, izay hitanao eto sy eto. Na izany aza, ity manaraka ity dia notsoahina avy amina lahatsoratra vao navoaka, nefa nosoratana tamin'ny 10 Janoary:
Nisy olona niantso ahy hiteny hoe te-hamoaka ny lahatsoratro hono izy… niteny izy fa afaka manome vola ahy… vola avy amin'ny fijalian'ny olona? Izany no anton'ny hoe tamin'izaho nankaty, tonga aho ary niteny fa tsy misy n'inon'inona ataoko miaraka amin'ny mpanao gazety sy ny fanaovan-gazety… mba alefaso any amin'ny tokony hisy azy ny volanao, amin'ireny fikambanana sivily manohana ny fanovana ankivy ny voktra israeliana ireny … alefaso any amin'ny PCHR ny volanao: Foibe Palestiniana miaro ny zon'olomblelona… Tsy te-hiteny anao aho hoe aiza no tokony alefanao ny volanao… Tsy dia ilainao akory aza izany… ny zava-dehibe kokoa dia ny hafanam-ponao… ny feonao, mandoaka fahanginana, maneho… mifidiana! Ary miangavy mba tsy ho asiana resaka volon-koditra, firazanana, maha-lahy sy maha-vavy… fa ataovy manaraka ny ara-moraly sy ny fahamarinana… ary mazava ho azy, ny politika ivelany…
Faranantsika miaraka amina mpitoraka blaogy avy any Gaza lavitra any, Mutasharrid (‘olona tsy manan-kialofana’ na ‘mpirenireny’) dia any Khuza'a, atsinanan'i Khan Yunis amin'ny faritr'i Gaza atsimo. Io dia faritra niantefan'ny fanafihana Israelianina maro vao haingana teo, izay nanery an'i Mutasharrid hitsoaka ny tranony, ka lasa tsy manan-kialofana:
Hatramin'ny nandaozanay ny fonenanay tany Khuza'a, Lasa mponina nafindra toerana izahay.